Izizathu ezi-3 zokuqesha abaguquleli abaqinisekisiweyo
Iinkampani ezishishina kwiimarike zamazwe angaphandle zihlala zifuna iinkonzo zokuguqulela ukuze zinxibelelane nabathengi okanye uluntu lwazo. Kunokuhenda ukusebenzisa izixhobo zokuguqulela okanye umqeshwa othetha iilwimi ezimbini. Nangona kunjalo, akukho nanye kwezi idla ngokuba yeyona ndlela ilungileyo, ngakumbi xa uguqulela amaxwebhu oshishino. Ezi zilandelayo zizizathu ezithathu ezibalulekileyo zokucinga ngokuqesha abaguquleli abaziingcali endaweni yoko.
1. Ukuchaneka nokungaguquguquki
Ukuchaneka sesinye sezizathu ezibalulekileyo zokuqesha abaguquleli abaziingcali. Baguqulela amagama baze baqinisekise ukuba igrama, iziphumlisi nopelo zichanekile.
Njengoko abaguquleli abaqinisekisiweyo bekwangababhali abanesiphiwo, baya kunceda ukugcina umyalezo wakho ucacile kwaye umfutshane. Ukongeza, bajonga ukuhambelana kwisicatshulwa sonke, ukunceda ukufikelela kwilizwi elidibeneyo lophawu.
2. Ukuqonda iNkcubeko
Kudla ngokubakho ukwahluka phakathi kwamazwe adlulela ngaphaya kolwimi. Imithetho nemimiselo iyatshintsha, izithethe zasekuhlaleni ziyahluka, kwaye iintsingiselo zamagama zinokwahluka kakhulu. Igama eliqhelekileyo nelibonisa uthando kolunye ulwimi lisenokuba sikhubekisayo kolunye. Konke oku kunokongeza kwiinguqulelo zoqobo ezinokwenzakalisa ishishini lakho kunye nobudlelwane.
Ukuthintela oku kungenzeki, kungcono ukuqesha abaguquleli abaqinisekisiweyo. Bathanda ukwazi okungakumbi kunamagama nje ofuna ukuguqulelwa kuwo. Abaguquleli abaziingcali nabo baqonda okuninzi malunga nenkcubeko ulwimi olunxibelelene nayo. Banokuguqulela amaxwebhu akho ngelixa beqinisekisa ukuba umyalezo ojoliswe kuwo ufikelela ngokuchanekileyo.
Abaguquleli abaninzi abaqinisekisiweyo basebenza ngokukhethekileyo kwishishini elithile. Oku kuyingenelo njengoko benokuyiqonda ngcono into ozama ukuyithetha. Ngaloo ndlela, banokuqinisekisa ngakumbi umyalezo ocacileyo, omfutshane, kunye nobhalwe ngobuchule.
KuLwimi 411, sifumene abaguquleli abavunyiweyo beelwimi ezingaphezu kwe-160. Banezakhono kumaxwebhu aqhelekileyo, kwaye sinabaguquleli abaziingcali kwezobuchwepheshe, ukufudukela kwelinye ilizwe, ezomthetho, ukuthengisa, ezenzululwazi, ukhathalelo lwempilo, kunye neeprojekthi zoluntu. Qhagamshelana nathi namhlanje ukufumana ikowuti yasimahla kwiimfuno zakho zokuguqulela.
Sithumele i-imeyile: service@language411.com
Sitsalele umnxeba: 510 842 3550
© 2021 Ulwimi 411 | Onke Amalungelo Agciniwe